IBC ပြပွဲနေ့2ထုပ်ပိုးခြင်း! #IBCShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 IBC ပြရန် » IBC ပြရန်နေ့2အသုတ်စုံ! #IBCShow
IBC ပြရန်နေ့2အသုတ်စုံ! #IBCShow
IBC2မှာနေ့ 2015 အလုပ်များနေ့ - အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Janet အနောက်များအတွက်! သငျသညျအောကျပါအနေဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အမျှသူမကအားလုံးကို Janet အကြောင်းကိုယနေ့ဖွင့် ... အပေါငျးတို့သ Show ကိုကြမ်းပြင်တစ်ဝိုက်ယနေ့ပဲ!
လွန်စွာလိုလားသော သူတို့ရဲ့အထင်ကြီးထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအချို့သောအထူးဧည့်သည်များထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ သူဟာ Emmy-ဆုကို-အနိုင်ရအသံကအယ်ဒီတာဂျိမ်း Mather (မစ်ရှင် Impossible3၏ကြီးကြပ်အသံကအယ်ဒီတာ), နှင့်အတူကဒီမှာ လွန်စွာလိုလားသော အဆိုပါ IBC ပြပွဲသည်။ ဂျိမ်းနှင့်အတူအထူးသဘောကျပြီး လွန်စွာလိုလားသော ယေဘုယျအားဖြင့်အသံတည်းဖြတ်ရေးဆွေးနွေးတင်ပြ S6 နှင့် Pro Tools များနှင့် လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များအထူးမစ်ရှင် Impossible6နှင့်အတူ S3, ။ အသံလွှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြင်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။ လွန်စွာလိုလားသော လာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာ IBC ပြပွဲ၏အနီးကပ်မတိုင်မီဒီဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကိုပိုမိုကြိမ်တင်ပြနေပါတယ်။ မှစ. လွန်စွာလိုလားသော Orad ဝယ်ယူ, လွန်စွာလိုလားသော's MediaCentral ပလက်ဖောင်းယခုမှာလည်းသူတို့စတူဒီယို Suite တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အဘယ်အရာကိုများပါဝင်သည်။ တဲ (သို့မဟုတ်တင်ဆက်မှု) က Pop နှင့်ဤထို့အပြင် beefs-Up ဘယ်လိုတစ်ခုပြီးသားအထင်ကြီးထုတ်ကုန်ကြည့်ပါ။ အခြား လွန်စွာလိုလားသော မီးမောင်းထိုးပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော နေရာတိုင်းရူပါရုံကို။ ဒါဟာအမြော်အမြင်ဖွင့်, ရဲရင့်ရဲ့; ယင်း လွန်စွာလိုလားသော.
Blackmagic ဒီဇိုင်း အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှုနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏လှသောအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဤနှစ်တွင်, သူတို့ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကို၎င်း B4 မကြာသေးမီက Ursa Mini ကိုကင်မရာ, Decklink ကို Quad2(ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်များ၏လိုင်းအတွက်လာမယ့်ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်များ Decklink လိုင်းအားဖြင့်ငါတို့အားယူဆောင်) အတွက် mount ပါဝင်သည်။ စံချိန်စံညွှန်းများ converter ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်လိုင်း - ထို Teranex - သစ်ကိုတိုးတက်လာသော software ကိုရရှိသွားတဲ့နှင့် Mini ကိုဗီဒီယိုက converters အချို့မော်ဒယ်သစ်။ မြင်ကွင်းစုံ 16 ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တယ်နှင့် Awesome ၏ဤအသစ်သောလှိုင်းထုတ်ရှာနိုင်ပါတယ်, Blackmagic ဖြေရှင်းရန် 12 ရေကြောင်းစတင်နေပြီကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ Cinegy ပြပွဲမှာ, ဂျိန်းဟာ Cinegy Air ကို PRO အကြောင်းကို Lewis က Kirkaldie (ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဦးခေါင်း) နဲ့ chatted ။ စစ်မှန်တဲ့အချိန်ပလေးအောက်နှင့်အတူ multi-ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်အလိုအလျောက်! Cinegy Air ကို PRO အားလုံးတဦးတည်းတည်နေရာအတွက်မျိုးစုံလိုင်းများအဘို့အမျိုးစုံ features နဲ့ထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် Workflows တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်! Dolby encoding က, EASတစ် Cinegy စတိုင်ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာအဖြစ် Nielsen ရေစာကဒီဦးဆောင်အစွန်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူ store မှာဖွင့်အရာကိုပဲနမူနာဖြစ်ကြသည်။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ တကယ်အသစ်က RAI Amtrium အားလုံးကိုထွက်သွားပြီ။ sponsored ပြားများနှင့် အဓိကနဲ့တူခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဖုံးလွှမ်း: ပိုလုပ်ပါက IP ကူးပြောင်းမှုအတွက် virtual မာစတာစီးပွားရေးဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူအောက်ဖြုန်းနှင့် တစ်ဦး Omni-ပလက်ဖောင်းကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ကြော်ငြာအခွန်ဝန်ကြီးဌာနကြီးထွားလာ။ CEO ဖြစ်သူချာလီ Vogt ထုတ်ကုန်ပျေါလှငျနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ကျေနပ်သလိုပဲ - ပလက်တီနမ် SX Pro ကို Multi-ကြည့်ရှု, ပလက်တီနမ်M IP3 နှင့် VX router များ, အမက်ဂျလန် Sdn orchestral နှင့်အမျိုးမျိုးသော Selenio MCP အပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်။ Open-စံဖြေရှင်းချက်အနာဂတ်-အထောက်အထားများနှင့််စပ် Workflows အပေါ်သွက်နှင့်သိကောင်းစရာများဆွေးနွေးမှုများရဲ့စဉျးစားကွညျ့အမျိုးမျိုးသောတင်ပြချက်များအတွက်ဖုံးလွှမ်းဘာသာရပ်များ၏အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
IBC မှဆွေမျိုးမျက်နှာသစ်အဖြစ်, iZotope တစ်ဦးအပြေးက start မှချွတ်သည်။ iZotope အဆိုပါ IBC2015 မှဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကတစ်ဦးသုံးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အောငျပှဲခံအရာရှိတဦးပွဲဦးထွက်စေသည်။ အဆိုပါ RX, RX နောက်ဆုံး Mix များနှင့် RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးဒီသုံးကနေလက်မောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ချက်လက်ခံရရှိ workflow နှင့်အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ ရပ်တည်ချက် D8 မှာခန်းမ 70 ၌သူတို့အထဲကစစ်ဆေးပါ။
Matrox / (Multi-ရုပ်သံလိုင်း SD က Matrox DSX ရေးသားသူထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်နေပါတယ်HD/ 4K I / O ကတ်များနှင့် High-density ကို H.264 encoding ကကဒ်များ) သည်ဧကရာဇ် HD ပရော်ဖက်ရှင်နယ် streaming များနှင့်မှတ်တမ်းတင်ပစ္စည်း (စမ်းချောင်းအကြာတွင်တည်းဖြတ်ရေးများအတွက်ရိုက်ကူးနေစဉ်စက်ကိုသုံးပါရန်ဤအသေးစားလွယ်ကူသောနှင့်အတူအသက်ရှင်), အ Matrox ဧကရာဇ် HDX (က hyper ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Dual-ရုပ်သံလိုင်း H.264 အန်ကုဒ်), နှင့် VS4Recorder Pro ကို Multi-ကင်မရာအသံဖမ်း app ကို (တိုးတက်အောင် အဆိုပါပြီးသားအထင်ကြီး VS4Recorder) ။ နည်းပညာအစဉ်အမြဲအမြင့်, အမြဲတမ်းအံ့မခန်း!
Telestream အဆိုပါ IBC 2015 ဘို့တဆယ် (ထိုညာဘက်ရဲ့ဆယ်) ထုတ်ကုန်ထုတ်မိတ်ဆက်။ Vantage, Switch, အတွက် Wirecast, Post ကိုထုတ်လုပ်သူ, ဇာတ်လမ်းတွဲ, Vantage တိမ်တိုက်, ပိုက်လိုင်းနှင့် Macaption: ရှစ်လက်ရှိအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ VOD ထုတ်လုပ်သူ DAI နှင့် Tempo: ဤနှစ်ခုအသစ်သောထုတ်ကုန်များကထုတ်ဝိုင်းနေကြသည်။ Telestream'' s ကို VOD ထုတ်လုပ်သူ, DAI, Cable ကို VOD အကြောင်းအရာအတွက်ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းဖို့အစွမ်းထက်စွမ်းရည်များအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အချိန် အသုံးပြုသူများကလုပ်စရာမလိုဘူးဆို programming ကိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ running အချိန်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကျနော်တို့အားဖြင့်ဝှေ့ TSL ထုတ်ကုန်များ အသစ်က Virtual Panel ကိုကြည့်ရဖို့ add-on option ကိုယင်း၏ပြီးသားအထင်ကြီး Tallyman စနစ် IBC2015 မှာ။ ဤသည်မှာထို့အပြင်ဖြောင့်သည်၎င်း၏သေတ္တာထဲက Tallyman ဖို့အလွန်အမင်းထိုးထွင်းသိမြင် interface ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများလျှောက်ထားဖို့ Tallyman ကို virtual panel ကိုအသုံးပြုသူများကို enable ပါလိမ့်မယ်။ နေဆဲင်း၏စိတ်ကြိုက်သဘာဝထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, လုနီးပါးချက်ချင်းအသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုအဘို့ဤအစွမ်းထက်စနစ်၏အပြည့်အဝအလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကို Unleashing ။
5pm (ဒေသစံတော်ချိန်) ကကျနော်တို့ရောက်ရှိ Vizrt Display ရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ perusal များအတွက်ရရှိနိုင်အသစ်တခုသောမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီးစနစ်ဖြင့် viz တစ်ခုမှာ (ယခု AS-11 ပီပီ MXF metadata ကိုများအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း), ဂရပ်ဖစ် Hub 2.4.0 (များ၏လတ်တလောဗားရှင်းနဲ့အတူသစ်ကို viz Eclipse, viz အင်ဂျင်၏နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဗားရှင်းခဲ့သည် ), ပြရန်, viz Multiplay, နှင့် The နောက်ဆုံးပေါ် viz Libero ၏တစ်မိနစ်ဗားရှင်းအထိအသစ် (အ viz Mosart နှင့် viz opus အလိုအလျောက်စနစ်များ (တစ်ဦးအလိုလိုသိ interface ကိုထံမှ scrip ခွင့်ပြုထုတ်လုပ်သူများစွမ်းရည်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့) ကိုဖန်ဆင်းသော, နှင့် The နောက်ဆုံးပေါ် Vizrt လူမှုတီဗီဖြေရှင်းချက် (Twitter ကိုပြတိုက်နှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုပြ), နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် viz ကမ္ဘာ့ဖလား။ တဲအားဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်အသစ်ဖွင့်အဘယျသို့ em ကိုမေး! သူတို့သည်သင့်ကိုအဆုံးသတ်-Up စေခြင်းငှါသူတို့၏တဲမှာနေ့ကတည်းခိုထိုမေးခွန်းကိုအဘို့အဒါအဖြေကိုရှိသည်!
Janet အရေးကြီးသောပြသခဲ့သည်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပေမယ့်, ငါသည်အချွတ် snuck ... အဆိုပါ IBC ပြပွဲဖန်တီးမှု, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်နှင့်မီဒီယာပစ္စည်းများပို့ဆောင်မှုဖုံးအုပ်ကျော် 1,700 ပြသခဲ့သည်နှင့်တကွ, RAI အတွင်းတိုင်အောင်တဆယ်လေးခန်းမကိုဖြတ်ပြီး sprawls ။ အဆိုပါ IBC အတွေ့အကြုံမှမရှိမဖြစ်အထူး Feature ကိုဧရိယာနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ IBC ပြပွဲတစ်လျှောက်လုံး Hosted ဤ Mini-ဖြစ်ရပ်များအရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းထုတ်ကြောင်းနည်းပညာများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏လူတိုင်း၏နားလည်မှုတပုဒ်ကိုသည် IBC ညီလာခံသို့ယက်နေကြပါတယ်။
သူတို့အားအထူးအင်္ဂါရပ်ဒေသများတစ်ခုမှာကမ္ဘာ့ဦးဆောင် R & D ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်ဖြတ်တောက်-အစွန်းစီမံကိန်းများနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အတူပြသခဲ့သည်ပါရှိသည်သော IBC အနာဂတ်ဇုန်, ဖြစ်ပြီး, IBC မှာသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတိုးတက်လာပျော်မွေ့နေပါတယ်အဖြစ်ဤငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးတွေထဲကပါ!
အဆိုပါ IBC အနာဂတ်ဇုန်မဟုတ်ဘဲအနာဂတ်အတွက့်တစေ့တစောင်းထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လမ်းညွန်မြင်နိုင်ရန်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကနေအိမ်အဆိုပါပိုစတာများဖို့လည်းဖြစ်ပါသည် - သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုများအတွက် IBC နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းစာများကကော်မတီကရွေးချယ်အလွန်လေးစား, အသေးစိတ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စိတ်ကူးများ IBC ရဲ့ညီလာခံအစီအစဉ်နှင့်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း startle ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များ၏ဘာသာရပ်များဖြစ်သည်။ IBC2014 မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများအနက်ခဲ့ကြသည်: HEVC စတူဒီယိုထဲမှာ; 3D အသံ၏အမြင်; လူအစုအဝေးရင်းမြစ်မှရသည့်ဂီတ; DTV မိုဘိုင်းစောင့်ကြည့်; object-oriented ဇာတ်လမ်းပြောပြ; Visual အရည်အသွေးမက်ထရစ်; တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ် 4K အသံလွှင့်; နှင့်ပိုပြီးဤမျှလောက်များစွာသော!
အားလုံး 360D (နှင့် 3D) °ရှိသမျှတို့, မျက်မှန်-အခမဲ့2အတွက်ယခုနှစ်အနာဂတ်ဇုန်မှာကြီးစိုးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် (သင် Pun လွှတ်မည်လိမ့်မယ်လျှင်) အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုဤနည်းပညာကို nursing သောအတော်ကြာ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည်ငါ့မျက်စိဖမ်းမိ။
Vision ၏ III ကို Imaging, Inc နှင့်သူတို့၏အတိမ်အနက်ကို-တိုးမြှင် 2D & 3D Parallax ပုံရိပ် - v3 optical နှင့် software
IABM IBC မှာ
tools တွေမှတ်တမ်းတင်ဘို့တီထွင်ခြင်းနှင့်စံ display တွေပေါ်သုံးရှုထောင် Parallax အတိမ်အနက်ကိုသတင်းအချက်အလက်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားနည်းပညာများစံအကူအညီမပေးဘဲ (မျှမျက်မှန်) display ကိုအပေါ်တင်ပြသည့်အခါတိုးမြှင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပိုမိုသရုပ်မှန်နှင့်အတူ, ပြတ်သား, ပိုမိုရှုထောင်ပေါ်လာ v3 ပုံရိပ်၏ဖန်တီးမှုအဘို့ခွင့်ပြုပါ။ ထို့အပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများအတွက် software ကို toolsets ၏တစ်ဦးစီးရီး, VR ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ-ခွဲစိတ်ပုံရိပ်နှင့်စစ်ရေး / ဥပဒေစိုးမိုးရေး applications များရရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကို Explore: www.inv3.com
လူအပေါင်းတို့သည်အနာဂတ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ယူနှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောပြုသောပူဇော်သက္ကာ, ရှိခဲ့သည် ...
°ချောမွေ့စွာ 360 ဗီဒီယိုများအတွက်ချုပ် Videostitch - VideoStitch တိုက်ရိုက် Virtual Reality ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးဗီဒီယိုချုပ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူတို့ကလုံးဝနီးပါး multi-မှန်ဘီလူးကင်မရာရပ်တည်ရှိရာတစ်ဦး Oculus Rift device ကိုသုံးပြီးကြည့်ရှုသယ်။ အပြည့်အဝ 360 အတွက် VR ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှုထောင့်° - အခုတော့တဦးတည်းရုပ်ပိုင်းရှိသွားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲနေအိမ်ထဲကနေတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်းဖြစ်ရပ်တစ်လူတန်းစားတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ မှာပိုပြီးကြည့်ရှုပါ: www.video-stitch.com
Whew! ဆက်ဆက် Janet န်းကျင်တွင်အောက်ပါပင်ပန်းတယ်ပါ! သူမကမနက်ဖြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာငါ onder? လာမယ့်အချိန်အတွက် Tune - တူညီလင်းနို့-အချိန်, တူညီတဲ့လင်းနို့-ရုပ်သံလိုင်း! 🙂
ဤအထူးပြပွဲမှာယနေ့ - အနာဂတ်ဇုန်အတွက်မနက်ဖြန်ထုတ်ဖော်ပြသ
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများကနေရှေးခယျြထားတဲ့စူပါ Hi-Resolution, 2D, 3D နှင့်ပိုပြီးမြင့်မား dynamic range ကို, ။ သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလက်ရှိ State-Of-The-Art မီဒီယာနည်းပညာများသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ အမြဲအဖြစ်, IBC စိတ်ပျက်မဟုတ်ပါခဲ့ပါဘူး! အတူတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းဆောင်ခဲ့သည့် IBC ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, ကတစ်ဖန်တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရှိန်အဟုန်ယခုနှစ်အတွက်မီးရှူးတိုင်သယ်ဆောင်။ အဆိုပါ IBC အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.ibc.org။ အမြဲတမ်း blogged-In နေဖို့သတိရ!
2015 4K လွန်စွာလိုလားသော ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး blackmagic ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cinergy H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC2015 ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo iZotope JCT-VC ကို MATROX ဆူညံသံလျော့ချခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု Telestream TSL ထုတ်ကုန်များ UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vizrt Warsaw ကို 2015-09-12
နောက်တစ်ခု: IBC ပြရန်နေ့3အသုတ်စုံ! #IBCShow